TECH-BIO Aka Sanitizer Original 20ML
TECH-BIO Aka Sanitizer Na-esi ísì 45 ml
TECH-BIO Hand Sanitizer Moisture 500ML
75% ọgwụ mgbochi mmanya
50ml 75% mmanya na-egbu egbu TECH-BIO
500ml 75% mmanya na-egbu egbu TECH-BIO
2.5L 75% mmanya na-egbu egbu TECH-BIO
Ihe eji eme mmanya na-egbu egbu
2021 70% isopropyl mmanya Aka Sanitizer Disinfecta...
45ml akpa aka sanitizer
N'ogbe TECH-BIO Hand Sanitizer Moisture 500 ML Su...
OEM&ODM Hand Sanitizer emeputa
N'ogbe 500ml 75% mmanya na-egbu egbu TECH-BIO Fa...
Ọkacha mma Hanging Hand Sanitizer - 20ml akpa ha...
Ọnụ ala 1 Oz Hand Sanitizer - 20ml akpa aka...
ụlọ ọrụ ọkachamara maka Ụlọ Ahịa Aka Sanitizer - 20m ...
Mma mma Hand Gel Antibacterial Just - 20m...
75% Onye nrụpụta ihe na-egbu mmanya mmanya OEM hazie
Kpamkpam dabere na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ “anhydrous ethanol (Q/RJDRJ 03-2012)” mmepụta nzukọ. Asọpụrụ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke China, ZhongRong Technology Corporation Ltd. (koodu ngwaahịa: 836455) bụ ọkachamara na ngalaba nke Biochemical, Pharmaceutical Chemicals, Fine Chemicals and New Energy. Dabere na ozi "na-akwalite ọha ọganihu site sustainableinnovation" , ụlọ ọrụ concentrates na R & D, mmepụta na ahịa nke ethanol dị ka nke ọma ...
Ethyl acetate bụ ụdị ngwaahịa kemịkalụ dị mma a na-ejikarị eme ihe, nwere ọmarịcha solubility, akọrọ ngwa ngwa, ọtụtụ USES, bụ ụdị akụrụngwa kemịkalụ kemịkalụ dị oke mkpa na ihe mgbaze ụlọ ọrụ mara mma, ejirila ya na acetate, ethyl cellulose, chlorinated. roba, vinyl resin, acetate fiber resin, sịntetik roba, mkpuchi na agba na usoro nke mmepụta. 1, dị ka ihe mgbaze ụlọ ọrụ, eji na mkpuchi, adhesives, ethyl cellulose, akpụkpọ anụ artificial, linoleum colorants, ...
Ethyl Acetate Chemical Manufacturer MOQ 20FT akpa
Ethyl Acetate Supplier MOQ 20ft Container Ezi Nkwalite Ahịa
Ethyl acetate bụ ụdị akụrụngwa kemịkalụ kemịkalụ dị mkpa, enwere ike iji rụpụta acetamide, acetyl acetate na methyl heptene ketone, wdg, na isi, agba, ọgwụ, ink mbipụta dị elu, owu collodion, nitrocellulose, akwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. ọtụtụ ebe, bụ otu n'ime usoro onunu ogwu ibu sịntetik ngwa nri na oriri ekpomeekpo, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke na-ekenye a banana, ube, piich, painiapulu, grape senti ekpomeekpo, wdg nwekwara ike-eji dị ka mmịpụta gị n'ụlọnga na dehydrating gị n'ụlọnga, ...
Aka ncha ncha Mousse Sanitizer mmanya na-eweta Jasmine Flavour efu
Foam hand sanitizer dị nnọọ mfe iji: 1. mgbapụta isi extruded bụ ụfụfụ, na-ahapụ usoro nke itinye mmiri, ịsacha na ụfụfụ. 2. ichekwa onunu ogwu: oge ​​ọ bụla ojiji bụ nani ọkara ego dị ka nkịtị hand sanitizer. 3. mmetụta abụọ: ụfụfụ kpọmkwem, ọ dịghị mfe ịdaba n'oge etiti etiti, na-eji ihe ndị dị irè na-eme ihe n'ụzọ zuru ezu na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka nhicha dị ọcha, sterilization, mmetụta mmiri. Ihe ndị chọrọ nlebara anya: 1. Mgbe ị na-eji hand sanitizer, apịla nke ukwuu ...
Aka ncha ncha Mousse Sanitizer mmanya na-egbu egbu na-eweta ụtọ Rose
Foam hand sanitizer dị nnọọ mfe iji: 1. mgbapụta isi extruded bụ ụfụfụ, na-ahapụ usoro nke itinye mmiri, ịsacha na ụfụfụ. 2. ichekwa onunu ogwu: oge ​​ọ bụla ojiji bụ nani ọkara ego dị ka nkịtị hand sanitizer. 3. mmetụta abụọ: ụfụfụ kpọmkwem, ọ dịghị mfe ịdaba n'oge etiti etiti, na-eji ihe ndị dị irè na-eme ihe n'ụzọ zuru ezu na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka nhicha dị ọcha, sterilization, mmetụta mmiri. Ihe dị mkpa nlebara anya: 1. Mgbe ị na-eji hand sanitizer, apịla t...
Ncha ịsacha aka Mousse Sanitizer mmanya na-enye ihe n'efu
Asọpụrụ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke China, ZhongRong Technology Corporation Ltd. (koodu ngwaahịa: 836455) bụ ọkachamara na ngalaba nke Biochemical, Pharmaceutical Chemicals, Fine Chemicals and New Energy. Dabere na ozi "na-akwalite ọganihu ọha mmadụ site n'inwe ọganihu" , ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na R & D, mmepụta na ịzụ ahịa nke ethanol yana mmepụta ya na elu na ala nke ihe karịrị afọ iri abụọ, ma na-etinye onwe ya n'ịbụ onye na-eweta asọmpi maka ndị na-abụghị ọka ...
Yiri ihe mkpuchi ma saa aka gị! Okwu isii ndị a abụrụla ihe a na-eme kwa ụbọchị maka anyị niile nọ n'okpuru ọrịa a. Aka anyị na-enweta ọtụtụ nje bacteria na nje nje kwa ụbọchị, na ụma ma ọ bụ n'amaghị ama. Ọ dịghị mkpa ikwu ọtụtụ ihe banyere mkpa ọ dị ịsa aka ugboro ugboro na nke ọma. Ọmụmụ gel disinfection na-enweghị aka na-eme ka usoro nsị ahụ dị mfe ruo n'ókè dị ukwuu, na-apụ na mmachi nke "mmiri", na-eme ka usoro nsị ahụ kwụsị ...
Ethanol zuru oke na-ezo aka na ngwọta mmiri nke Ethanol na ịdị ọcha dị elu. N'ozuzu, a na-akpọ ya ethanol anhydrous na ntinye nke 99.5%. Anhydrous ethanol bụ ngwakọta nke ethanol na mmiri. Njirimara anụ ahụ maka ọdịdị Ethanol Anhydrous & Njirimara: mmiri mmiri na-enweghị agba nwere ísì pụrụ iche. Ebe mgbaze (℃): 114.1 ikwu njupụta (mmiri = 1): 0.79 esi esi (℃): 78.3 ikwu vepo density (ikuku =1): 1.59 Volatility: Volatile The refractive index: 1.3611 (20 ℃) ​​Pro...
N'ogbe 500ml 75% mmanya na-egbu mmanya TECH-BIO Factory
99.99% na-egbu ọtụtụ nje nje
Chebe ahụike ezinụlọ gị
A na-anwale ịrụ ọrụ nje bacteria nke ngwaahịa a dịka ọkọlọtọ obodo si n'aka ụlọ ọrụ nyocha ntozu dị mkpa. Ọnụego ọgwụgwọ dị irè nke ngwaahịa a megide Escherichia coli, Staphylococcus aureus na Candida albicans nwere ike iru 99.99% n'okpuru ọnọdụ ule maka otu nkeji. Nsonaazụ bụ maka ntụnye aka.